Ekwentị KFC nke Huawei rụpụtara nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị | Akụkọ akụrụngwa
Ekwentị KFC nke Huawei mere nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị
Ahịa telephony na-adịwanye iche, maa. Anyị achọtala ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ekwentị ndị raara nye oge pụrụ iche ma ọ bụ ndị ama ama, ihe atụ nwere ike ịbụ mbipụta pụrụ iche Samsung Galaxy S7 maka Olympic, ma ọ bụ mbipụta ndị ọzọ pụrụ iche ewepụtara maka mkpụrụedemede sitere na ihe ịtụnanya Marvel. Ihe ị nwere ike ichetụbeghị n'echiche bụ ekwentị mkpanaka nke ngwa ngwa ngwa ngwa.
Huawei mere KFC ekwentị mkpanaaka ma ha agaghị ajụ gị ma ịchọrọ mkpirisi na usoro gị. Anyị ga-amatakwu nke ọma ihe mere Huawei ji rụpụta ngwaọrụ mkpanaka n'aka aha nri ngwa ngwa na ngwaike ọ na-ezo n'ime.
Anyị anaghị egwu egwu, ekwentị a dị na China ma ị nwere ike ịzụta ya. Emeela ya n'oge ncheta nke iri atọ nke ọbịbịa nke KFC na nnukwu Asia n'oge 1987. Na ekwentị KFC agaghị abụ nkọwa zuru oke na-enweghị karịa, anyị ga-ahụ ngwaọrụ nke anụ ọhịa ise nwere mkpebi HD (720p) ). A ga-ewu chassis na aluminom na-acha uhie uhie na ihu ga-abụ oji, ihe dịka iPhone 7 RED.
Iji bugharịa ya, anyị ga-enwe etiti Qualcomm Snapdragon 425 tinyere 3GB RAM. Maka nchekwa anyị ga-enwe 32GB nke nchekwa zuru ezu. Ka ọ dị ugbu a, batrị ahụ ga-enye anyị 3.020 mAh. Nsogbu bụ na ọ gaghị adị mfe inweta otu, Huawei ga - ebido nkeji 5.000 n’ahịa, Nke ga-abịa na ngwa egwu nke ga-enye gị ohere igwu egwu kachasị amasị gị na ndị ọkà okwu nke ụlọ nri KFC na China. Onu ahia ya bu euro 140 ka o gbanwee, odi oke ala, mana ire ya abughi nke obodo Eshia, o gaghi erute na ahia karia ala ya, belụsọ ma ndi nwa ebu n'afọ chọrọ ịkwụ ihe ha rịọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ekwentị KFC nke Huawei mere nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị
Ihe ndị a na-ekewaghị ekewa nke ụfọdụ ụdị nwere ike ịmasị ndị na-achịkọta ma ọ bụ ndị chọrọ ịnwe otu puku nke 5000 na obere.
Ndị a bụ laptọọpụ "egwuregwu" kachasị mma n'ahịa
Harvard na - ekeputa komputa kacha ike na mbara ala